Cusbooneysiinta IPhone 6x17 Podcast: Mawduuc Ka Bax | Wararka IPhone
Barnaamijka koowaad ee sanadka. 6 Podcast Podcast waa a dhacdo gaar ah oo loogu talagalay dhammaan dhagaystayaasheena. Markii ugu horreysay muddo lix sano ah taariikhda iPhone News Podcast, waxaan ka wada hadalnay wax walba marka laga reebo iPhone-ka. Toddobaadyadii la soo dhaafey waxaad soo jeedisey mowduucyo dhacdadan koowaad ee 2016 waxaan ku wadaagaynaa fikradahayada shineemo, ciyaaraha fiidiyowga, taxanaha, muusikada iyo waxyaabo kaloo badan.
Qeybtii hore Podcast Off Mawduuca de Actualidad iPhone ka qaybgal:
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 6 × 17 Podcast ee Actualidad iPhone: Mawduuca Ka Bax
Apple waxay higsaneysaa inay mar kale kacdoon ku sameyso lacagaha mobilada lagu bixiyo